Uzehlisa Kanjani Izindleko Zokutholwa Kwekhasimende Lakho Ukuze uthole I-ROI Ephezulu | Martech Zone
Uma usaqala ibhizinisi, kuyalingeka ukuheha amakhasimende nganoma iyiphi indlela ongakwazi ngayo, ngaphandle kwezindleko, isikhathi, noma amandla ahilelekile. Nokho, njengoba ufunda futhi ukhula uzoqaphela ukuthi ukulinganisa zonke izindleko zokutholwa kwamakhasimende ne-ROI kubalulekile. Ukuze wenze lokho, uzodinga ukwazi izindleko zokutholwa kwekhasimende (CAC).
Uzibala Kanjani Izindleko Zokutholwa Kwekhasimende
Ukuze ubale i-CAC, udinga nje ukuhlukanisa zonke izindleko zokuthengisa nezokuthengisa ezihilelekile ekutholeni ikhasimende elisha ngesikhathi esithile. Uma kwenzeka ungajwayele, sizodlula Ifomula ye-CAC lapha:
Ukukubeka kalula nje, uma uKarl esebenzise u-$10 ukumaketha indawo yakhe ye-lemonade futhi enze abantu abayishumi bathenge umkhiqizo wakhe ngesonto elilodwa, izindleko zakhe zokuthenga kulelo sonto zingaba ngu-$1.00.
Zithini Izindleko Zakho Zokutholwa Kwekhasimende?
Leso yisibonelo esilula ngenhla. Vele ngaphakathi kwenkampani yezinga lebhizinisi, i-CAC iyinkimbinkimbi kakhulu:
Isamba Sokuthengisa - lokhu kufanele kufake abasebenzi bakho bokuthengisa, ama-ejensi akho, izimpahla zakho, amalayisense akho esoftware, nanoma yikuphi ukukhangisa noma uxhaso oluhlanganisayo ekutholeni new ikhasimende.
Izindleko Zokuthengisa Ziphelele - lokhu kufanele kufake abasebenzi bakho bokuthengisa, amakhomishini abo, kanye nezindleko zabo.
Okunye okuyinkimbinkimbi ukulinganisa kahle isikhathi sakho lapho amakhasimende atholwe khona. Izindleko zokumaketha nezokuthengisa namuhla aziholeli ngokushesha ekhasimendeni elitholiwe. Kuzodingeka ulinganisele uhambo lwakho lokuthenga olumaphakathi… lapho okungenzeka ukuthi ikhasimende liqaphela umkhiqizo wakho lize lifike lapho liguqulela khona. Izikhathi eziningi, lokhu kungaba izinyanga noma iminyaka kuye ngemboni, imijikelezo yesabelomali, kanye nezingxoxo.
Kungakho kubalulekile ukuthi ufake isu elingenayo elikhomba kangcono ukuthi amathemba ezwa kanjani ngawe, lapho eqala ukuxhumana nawe, kuze kufike osukwini lwawo lwangempela lokuguqulwa.
Uzehlisa Kanjani Izindleko Zokutholwa Kwekhasimende Lakho
Uma usukwazi ukubala i-CAC yakho, uzofuna ukuyehlisa ukuze ubone inzuzo enempilo ekhasimendeni ngalinye. Enye into ozofuna ukuyenza gcina amakhasimende akhona — ukutholwa kwamakhasimende kungabiza imali ephindwe kasikhombisa kunokuthengisela amakhasimende akhona, phela!
Ukuze uthole amanye amathiphu okuthuthukisa izindleko zokutholwa kwekhasimende, I-GetVoIPI-infographic engezansi ibonisa amasu amahlanu asungulwayo. Isibonelo, ukudala okuqukethwe okubandakanyayo nokunenjongo kungakusiza ukuthi wakhe isibopho namakhasimende esiwafikisa endaweni yawo yokuthenga ngokushesha. Engeza amanye ama-CTA abulalayo futhi ungase uthole amakhasimende ethenga ucezu lokuqala lokuqukethwe alusebenzisayo!
Ungasebenzisa futhi i-marketing automation ukuze uzuze. Isibonelo, ababhalisile be-Birchbox bathola i-imeyili yokwamukela elandelwa uchungechunge lwama-imeyili ngamathiphu wobuhle namaqhinga wokuzilungisa. Abaningi balaba bantu abakaze bathenge, kodwa inkampani inikela ngenani lamahhala eliningi ngaphambili. Ungasebenzisa futhi ama-chatbots, ama-imeyili azenzela wena ngokwakho kanye nemikhankaso yenkundla yezokuxhumana ukuze uthuthukise ukusebenza kahle.
Ungathola lawa kanye namanye amathiphu ngezansi. Ngokwazi nokwenza ngcono i-CAC yakho, uzokwazi ukubona imbuyiselo eyengeziwe ekutshalweni kwezimali, futhi lokho kuhlale kuyinto enhle ukuyibona!
Tags: izindleko zokutholwakokujoyinauhlelo lokubambisanaibhokisi lebhokisicaccac ifomulabala i-cacUkukhangisa Okuqukethweukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwaizindleko ngokutholwa ngakunyekhokhoukutholwa kwamakhasimendeifomula yezindleko zokutholwa kwekhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeformulagetvoipindlela yokubala i-cacthuthukisa izinga lokuguqulwangcono croukuzenzekelayo kokuzenzekelayoizindleko zokumakethainombolo yamakhasimende atholiwei-retargetingizindleko zokuthengisa